Amathiphu Top Ukuze Kwekuheha Europe ngu zemininingwane Ngo 2020 | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > Amathiphu Top Ukuze Kwekuheha Europe ngu zemininingwane Ngo 2020
Amathiphu Top Ukuze Kwekuheha Europe ngu zemininingwane Ngo 2020
Ukuhamba emhlabeni Europe ngesitimela kuyinto isiko ahlala isikhathi eside ukuthi akayi ndawo ezisheshayo – Izitimela kukhona esheshayo, kakhulu eco-friendly futhi esebenza kahle kakhulu indlela yokuhamba bengonozulane. Nakuba ithikithi isitimela sethu uhlelo kuthatha ubuhlungu aphume ukuhlela isitimela yohambo, eziningi zokuhlela kanye nokulungiselela izinsalela. Ukuze sikusize ukuhlela uhambo ephelele emhlabeni Europe, nazi amathiphu ethu phezulu ukuhamba Europe ngesitimela.
Plan your route when you Izikhangibavakashi eYurophu zemininingwane
Ukuya eYurophu ngesitimela ku 2020 kubalulekile ukucabangela ukuhlela umzila wakho nokuthi uzochitha isikhathi esingakanani endaweni ngayinye. Uma Amsterdam, Berlin, London, Milan, Paris, futhi Venice kukhona ohlwini lwakho ngokuphelele kumele-bheka, ukuthola indlela enengqondo kakhulu ukuze lokhu kwenzeke. Yenza uhlu izindawo ofuna ukubona futhi ngaleyo ndlela ungakwazi cishe nizoklama uhambo lwakho. Nquma izinsuku zakho nokuthi zingaki izinsuku uzochitha endaweni ngayinye ukuqedela yakho umzila uhambo.
Ungazami ukupakisha uhambo lwakho ezinezindawo eziningi kakhulu
One of the worst things you can do when you Travel Europe by Train is to try and fit in too much. Kunomkhuba yemvelo ukuzama futhi ujamu emadolobheni amaningi kanye namazwe ngangokunokwenzeka ku uhambo lwakho, Nokho, akukho iphuzu ekuthatheni uhambo uma abayi ukuzwa uya khona ngamunye kahle! Packing kakhulu izindawo eziningi ku uhambo lwakho kuyabiza futhi ungavula iholide yakho ibe ukufiphala kwehhotela Ukungena nokungena nasemigwaqweni.
Kubaluleke kakhulu ukujabulela stop ngasinye ngokugcwele kuka ukuzama futhi uvumelane kakhulu. Ngeke ugcine ku zokuthutha futhi sithole isikhathi esengeziwe ukuhlola izindawo zakho.
Lapho uhlela umzila wakho ukuze Kwekuheha eYurophu zemininingwane, qinisekisa ukuhlola zezimali lamazwe. Akuwona wonke izwe Europe isebenzisa Euro. Ngisho amanye amalungu EU, ezifana Bulgaria futhi Croatia, namanje asebenzise imali yabo okuyinto ethize ezweni lakubo. Hlola lolu hlu Euro ne-Euro-non amazwe.
Frankfurt ePrague Izitimela
Okuthunyelwe okwabiwe yi-Fast Currency Converter App (@currencyconverterapp)
Incwadi yokuhlala kusengaphambili
Nakuba kungenzeka ukuba ukubhuka amahhotela kanye emahostela ngesikhathi usuka endaweni endaweni, siphakamisa ukuthi uzame ukwenza okusemandleni akho hhayi sifike kuphi kungekho yokuhlala kuvikelwe. Zama ukubhuka yakho amahostela/Amahhotela kusengaphambili owokuqala emadolobheni amathathu, ikakhulukazi emadolobheni ethandwa ngenkathi siphakame njengoba Berlin futhi ePrague. imicimbi, njenge imikhosi emadolobheni, futhi inethonya ukutholakala. Hhayi ukukhathazeka mayelana yokuhlala izindlela ungachitha isikhathi sakho ukwenza izinto ezingaphezu, efana ubuke futhi ejabulela isikhathi sakho khulula!
Vienna ukuze Cologne Izitimela
Hanover ukuze Cologne Izitimela
Ngobusuku obubodwa ngangokunokwenzeka – Izikhangibavakashi eYurophu zemininingwane
Uma kuphela uhlele kokuchitha usuku olulodwa nje edolobheni, zama ukuthola khona ngo ebusuku isitimela. Awufuni ukuba kokuchitha isikhathi sakho emini uhamba Ngokuthatha ngesitimela sasebusuku, ungakwazi eqela ngaphezulu ku yokuhlala futhi ungaba isikhathi esengeziwe ukuhlola uya khona. Lapho ukubhuka ngobusuku obubodwa yakho ithikithi isitimela qinisekisa ukuhlola kuthatha isikhathi esingakanani ukuze uthole kusuka endaweni eyodwa kuya kwenye.
Xoxa nabantu kanye Izikhangibavakashi yakho eYurophu zemininingwane
Qiniseka ukukhuluma bendawo noma ezinye abagibeli phezu yakho uhambo ngesitimela. Ulwazi ukuthi izonikeza ungakwazi yigugu ngaphezu yini uzothola in a guide travel. Ngu bekhuluma nabanye, ungase wazi phezu ezindaweni zokudla, ukuya ukudansa, amagugu afihliwe, omkhulu izindawo indawo, futhi indlela elula ukuhambahamba.
Ingabe uhlela Kwekuheha eYurophu zemininingwane e 2020? Qalisa ngokugcina usesikhathini okungcono ithikithi isitimela okunikezwayo yethu Facebook futhi Twitter Amakhasi noma usivakashele Londoloza Isitimela inthanethi I-sahlulwa ezitimeleni zamanani ehlisiwe yonkana Europe
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, bese uchofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftop-tips-travel-europe-train-2018%2F - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
Uma ufuna ukuba abe nomusa kubasebenzisi bakho, ungakwazi ukuqondisa kwabo ngqo amakhasi ethu search. Kulesi isixhumanisi, uzothola imizila ethu adumile isitimela – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une izixhumanisi lwethu IsiZulu kokwehla Amakhasi, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, futhi ungakwazi ukushintsha / pl ukuba / uyeke noma / ru futhi ngezilimi ezingaphezu.